မေ 10, 2013 တွင် 5:37 ညနေ
ငါဆက်တင်များတွင် "အပြည့်အဝဗားရှင်းအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ခွင့်ပြုပါ" ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အဆင့်မြှင့်တင်မှုအတွက် Check နှင့်အဆင့်မြှင့်လုပ်ဆောင်ဘယ်မှာမမြင်နိုင် box ကို check လုပ်ထားကြပါပြီ,
မေ 10, 2013 တွင် 7:22 ညနေ
အဆိုပါ wordpress ကို sidemenu အတွက်, ရှိသည် “ဒိုင်ခွက်” နောက်မှလိုက်နေသည်မှာ “updates တွေကို”
မေ 10, 2013 တွင် 8:26 ညနေ
မေ 23, 2013 တွင် 7:08 ညနေ
ငါပေါင်းစုံက်ဘ်ဆိုက်များကို အသုံးပြု. မှန်လျှင်ဤလုပ်ငန်းလိမ့်မည်?
ငါဆိုဒ်များ၏တဦးတည်းအတွက် update ကိုနှိပ်လိုက်ကြပေမယ့်ငါ့ကွန်ရက်က admin ရဲ့တက်ဖေါ်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ?
မေ 24, 2013 တွင် 7:50 နံနက်
အဆိုးဆုံး, plugin ကိုဖိုင်များကိုဒီကနေ download လုပ်ကို manually update လုပ်.
ဇွန်လ 20, 2013 တွင် 2:21 ညနေ
မေ 24, 2013 တွင် 10:00 နံနက်
ဒါကြောင့်, အဘယ်ကြောင့် update ကိုငါဖွင့်ခဲ့တယျခဲ့ပါ, ပထမဦးဆုံးအရာဌာန၌အလံကိုသတ်?
ငါကမရကြဘူး. အဘယ်ကြောင့်ယခုတွင်ငါသည်သင့်ရဲ့ website ကနေ plugin ကို download လုပ်ပါရန်ရှိသည်မယ်လို့, သော wordpress ကို repository မှအလုပ်လုပ်ရန်ထင်နေသည်?
မေ 26, 2013 တွင် 12:10 နံနက်
ကောင်းစွာ, ငါသည်ဤနှင့်ယခင် post ကိုဖတ်ရှုရန်အကြံပြုကြပါ, ဘာမှလုပ်ဖို့မည်သူမဆိုအတင်းအကျပ်မရနေပါတယ်, သင်ချင်တယ်အစဉ်အဆက်အဘယ်အရပ်ကသင်အလိုရှိသမျှကိုထည့်သွင်းစေခြင်းငှါ.
ဇွန်လ 12, 2013 တွင် 1:19 နံနက်
ငါသင်ခန်းစာနောက်တော်သို့လိုက်ပေမယ့်နေဆဲမဆိုအလံတက်လာမယ့်မမြင်မိပါဘူး… ကူညီပါ! 🙁
ဇွန်လ 12, 2013 တွင် 1:57 နံနက်
ကိစ္စမရှိပါဘူး – ရုံကဖြေရှင်း. သငျသညျကို update ပြီးနောက်ပြန်အမှန်တကယ်ဝစ်ဂျက်သို့သွားနှင့်အလံ option ကို select လုပ်ပါရန်ရှိသည်ထွက်နှစ်မြောက်မွေးနေ့. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
နိုဝင်ဘာလ 22, 2016 တွင် 11:07 နံနက်
ကျေးဇူးတင်စကားလူကို, သင့်ရဲ့ replied ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်. ဟုတ်ကဲ့, အပ်ဒိတ်မလုပ်ပြီးနောက်, သငျသညျကျော Dashboard ကိုသွားရန်ရှိသည်>ပေါ်လာ>widgets, ပြီးနောက်သင်ဖော်ပြရန်အလံအဘို့များစွာသောရွေးချယ်စရာမြင်ရပါလိမ့်မည်.
ဇွန်လ 27, 2013 တွင် 11:55 ညနေ
ငါဖြင့် Transposh Plugin ကို၏နောက်ဆုံး version ကို install လုပ်ပြီးဖွင့်…9.3!
ငါကဗီဒီယိုအကူအညီနဲ့နောက်တော်သို့လိုက်… အလံ option ကိုဘယ်မှာငါမူကားမတှေ့နိုငျ.
အဘယ်သို့ငါက default အဖြစ်အလံသတ်မှတ်နိုင်သည် ? set ခွင့် option ကိုဘယ်မှာလဲ??
advace အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် – CIRO
ဇွန်လ 28, 2013 တွင် 12:08 နံနက်
ဇွန်လ 28, 2013 တွင် 2:26 ညနေ
ငါကပြုမိပါပြီ! ဒါပေမယ့် plugin ကိုအတွက် configuration စာမျက်နှာအတွက်အလံအစားရွေးချယ်ဖို့မဆိုလမ်းမရှိ “english” – “ရုရှား” စသည်တို့ကို (ဘာသာစကားများ၏နာမတော်).
ငါ wordpress3.5.1 ကိုသုံးပါ
ဇွန်လ 28, 2013 တွင် 10:21 ညနေ
သင်ဝစ်ဂျက်ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာသင်က၎င်း၏စတိုင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်, ဒီ plugin ကိုရှေးခယျြစရာအတွက်ပေမယ့်တိကျတဲ့ widget ကရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်၌မရှိ, တူညီသောနေရာအရပ်၌သင်တို့သည်၎င်း၏ခေါင်းစဉ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်, စသည်တို့ကို.
ဇွန်လ 28, 2013 တွင် 10:50 ညနေ
ငါ widget ကဧရိယာထဲမှာ selector မြင်ကြပြီမဟုတ်.
သြဂုတ်လ 13, 2013 တွင် 10:26 နံနက်
ကိုယ့်ကို WordPress မှ updated 3.6 နှင့်မျက်နှာပြင်ဘာသာပြန်ချက်အပေါ်၏ interface ကိုလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီ. ဒါပေမယ့်အဆိုးဆုံးအရာငါဘာသာပြန်ပြီးပါပြီသောစာသားမဆိုစာသားကိုပြင်ပေးဖို့မထင်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. ငါနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း update ကို Transposh လုပ်ခဲ့တယ်နဲ့ကျွန်မကိုလည်းပြု၏ “အပြည့်အဝဗားရှင်း upgrade Allow” မှန်ကန်သောအလုပ်မလုပ်ခဲ့ဘူးရာ. ငါ့ကို screen ပေါ်မှာဘာသာပြန်ချက်အလုပ်ရရန်အဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုသိပါစေ ကျေးဇူးပြု. (လိမ္မော်ရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်နည်းနည်းသေတ္တာများနှင့်အတူကို click ရန် :). ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
သြဂုတ်လ 13, 2013 တွင် 1:41 ညနေ
သြဂုတ်လ 14, 2013 တွင် 12:15 ညနေ
မင်္ဂလာပါ, ငါ plugin ကို install လုပ်ပြီးပါကဿုံဖြင့် Transposh အလုပ်လုပ်တယ်. ငါပြခန်းကိုသွားနှင့်ငါကချဲ့ရန်ဓာတ်ပုံနှင့်အောက် scroll ပုံပေါ်နဲ့ကျွန်မလာမယ့်ပုံရိပ်အားပေးရအခါတိုင်း ပို. ပို. ရွေ့လျားကြောင်းပြတင်းပေါက်ပေါ် click လုပ်သောအခါပြဿနာလာ, အလွန်အဆင်မပြေခြင်းနှင့် inelegant တစ်ခုခု. Transposh ကို install မလုပ်ခင်ဓာတ်ပုံများတစ်ဦးပေါ့ပ်အပ်ဝင်းဒိုးထင်ရှားပေမယ့်လာမယ့်ဓာတ်ပုံကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အခန်းတစ်ခန်းထဲကနေမရွှေ့ခဲ့ဘူး. ငါက plugin ကို wp လိုက်ဘောက်စနှင့်အတူအချို့သောသဟဇာတမများအတွက်လိမ့်မည်ထင် 2. ငါသည်ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လို? ကြေးဇူးတငျစကား!
သြဂုတ်လ 14, 2013 တွင် 2:13 ညနေ
သငျသညျထိုပြဿနာကိုမြင်နိုင်သည်အဘယ်မှာရှိ url များကိုမဟုတ်လျှင်တကယ်မကူညီနိုငျ
သြဂုတ်လ 14, 2013 တွင် 2:31 ညနေ
သြဂုတ်လ 14, 2013 တွင် 2:34 ညနေ
မင်္ဂလာပါ, ဒါဟာထားပြီး url များ၏ content မြင်နိုင်သည်. ကြေးဇူးတငျစကား.
သြဂုတ်လ 14, 2013 တွင် 2:12 ညနေ
ငါတောင်မှနောက်ဆုံးဗားရှင်းဖို့ Plugin ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ပြီးနောက်အလံကြည့်ရှုရန်နိုင်ခြင်းဖြစ်၏. သင်က Fix ဖို့ကျွန်မကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည် ..?
သြဂုတ်လ 14, 2013 တွင် 2:14 ညနေ
သင်သဏ္ဌာန် / Widgets တွေဆပ်မီနူးထဲမှာသင့်လျော်သောဝစ်ဂျက်စတိုင် set သေချာအောင်လုပ်ပါ
သြဂုတ်လ 14, 2013 တွင် 2:17 ညနေ
က fixed ပါပြီ။. ငါ dint အသစ်ပြောင်းခြင်းမပြုမီဝစ်ဂျက်အတွက် selector ကိုမြင်တော်မူ၏။. ကျေးဇူးတင်ပါသည် Authors… Awesome ကို Plugin ကို… ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
သြဂုတ်လ 17, 2013 တွင် 9:29 နံနက်
အကြှနျုပျ၏က်ဘ်ဆိုက်ဟီဘရူးအတွက်လောလောဆယ်တွင် (လက်ဝဲဘာသာစကားမှလက်ျာဘက်) ငါအဖြစ်ကိုကောင်းစွာအမေရိကန်အင်္ဂလိပ် add ချင်ပါတယ်. အဆိုပါပြဿနာထိုနောက်ငါအတွက် plug ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်, ကြှနျတေျာ့တစျခုလုံးကို wordpress ကို control panel ကိုဟီဘရူးထံမှအင်္ဂလိပ်သို့ပြောင်းရွှေ့, စက်ဘ်ဆိုက်က၎င်း၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုပြောင်းလဲ (Website တစ်ခုလုံးကိုလက်ဝဲမှ aligned တယ်). ဒါနဲ့အရမ်းထိတ်လန့နှင့်ထဲမှာပလပ်များကိုပိတ်ထားသည်. ငါ wordpress ကိုအသစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, ငါဒါကျွန်မရဲ့ရွေးချယ်မှုများဘာတွေလုပ်နေလဲအံ့သြခဲ့ပါတယ်လုပ်နေတာငါဘယ်အရာကိုအတော်လေးသေချာမဖြစ်ကြောင်းကို? ငါဘာသာစကားများဆက်ပြောသည်ရှိရာအချို့လဲ tutorial အားလုံးညာဘက်သူတွေကိုကျန်ရစ်ခဲ့သည်ကိုမြင်လျှင်, အလျှင်းသူတို့ကိုဖြစ်ပျက်…
သြဂုတ်လ 17, 2013 တွင် 11:09 နံနက်
ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့, အဆိုပါဆက်တင်ရှိဒေသပေါင်းစည်းရေးအင်္ဂါရပ်ဖြင့် Transposh အတွက် default ဘာသာစကားအဖြစ်ဟီဘရူး set သို့မဟုတ် disable ကျေးဇူးပြုပြီး,
အဆိုပါ hitchhiker ရဲ့လမ်းညွှန်အဖုံးကိုသတိရပါ.
သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 2:55 ညနေ
အဘယ်ကြောင့်သင်ပယ်ရှင်း WordPress ကို repository မှရွှေ့ခဲ့ဘူး? သင်ဤ optional ကို / paid အခွင့်ထူးသင့်ရဲ့ website မှာတစ် website ရဲ့ backlink လိုအပ်သို့မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်သလား?
သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 10:59 ညနေ
လိုအပ်သောဘယ်တော့မှမ, နေဆဲမလိုအပ်ပါ, ဘေးဖယ်ထုတ် vs. ရွေးရသည့် (သို့မဟုတ်ပါကအထဲက code)
သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 10:31 နံနက်
နောက်တဖန်မင်္ဂလာပါ, ကျွန်မရက်အနည်းငယ်အကြာရေးသားခဲ့သည်သို့သော်မထူးပြီ. ကြေးဇူးပွုပွီး, ငါ wp Lightbox2 အတူဖြင့် Transposh plugin ကိုထုတ်ပေးသောသဟဇာတမဖြေရှင်းပေးနိုင်ပုံကိုမည်သူမဆိုကိုသိရ? သငျသညျဖွင့်လိုက်တဲ့အခါဓာတ်ပုံပြခန်းပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ချက်ချင်းကွယ်ပျောက်တတ်သောအ, သငျသညျစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေကိုသွားကြည့်ဖို့. ဒါဟာလာမယ့်ပုံတစ်ပုံကိုကြည့်ရှုရန်ငါပေးအခါတိုင်းဖြစ်ပျက်, ပို. ပို. အောက်ကလှုံ့ဆျော. အဘယ်အရာကိုဖြစ်ပျက်စေခြင်းငှါ? ငါသည်ဤအသစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်အမှားဖြစ်နိုင်ရာ၏မစဉ်းစား.
ဤသည်သာငါ့ကို activated ဖြင့် Transposh plugin ကိုယူပြီးဖြစ်ပျက်, ငါလှည့်သည့်အခါဓါတ်ပုံဿုံကြည့်ရှု.
ငါနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုမှာပြခန်းအင်္ဂလိပ်နှင့် Catalan တှငျမမွငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ.
ငါသည်ဤအတူရက်ပေါင်းများစွာကို ယူ. ငါအရူးမယ်. ကြေးဇူးပွုပွီး, တစ်စုံတစ်ဦးကငါ့ကိုလက်ပေးသည်?
စက်တင်ဘာလ 5, 2013 တွင် 10:44 ညနေ
ပဌမ, သင်ဤ plugin ကိုဖနျတီးဖို့လုပ်ကြီးစွာသောအလုပ်အကိုင်အဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်.
ငါသေးငယ်တဲ့တောငျးဆိုခကျြရှိသညျ : ဘယ်လိုကိုယ့်ဘာသာပြန်ထားသောဘာသာစကားမှာပို့စ်တစ်ခုခြင်းစီရဲ့အစမှာတစ်ဝါကျ add နိုင်ပါတယ် ?
ငါကအောက်ပါစာသားကို Google မှာသို့မဟုတ် Bing အားဖြင့်ဘာသာပြန်ပြီးပါပြီကြောင့်စာဖတ်သူများသတိပေးချင်ပါတယ်သို့မဟုတ် ….
စက်တင်ဘာလ 5, 2013 တွင် 10:58 ညနေ
ယင်းကုဒ်တိုကိုကြည့်ပါ (အပေါ် http://trac.transposh.org) နှင့် not_in ကုဒ်ကိုသုံးပါ, သငျသညျ enabled default ဘာသာစကားအတွက်ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ကြသေချာအောင်.
စက်တင်ဘာလ 6, 2013 တွင် 10:12 နံနက်
wahou wahou ! ဒါကတကယ်ကြီးမြတ်အလုပ်လုပ်တယ် !
အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 10:45 နံနက်
ငါသည်သင်တို့၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းအပြည့်အဝပေးဖို့ကို update ကြိုးစားခဲ့ကြ. ဒါပေမယ့် update ကိုမှာအားလုံးဖွင့်ပြသရန်မရနိုငျ. နှိပ်လိုက်ဖူး “အပြည့်အဝဗားရှင်းအဆင့်မြှင့် Allow” နှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမ update ကိုတက် showes. အဆိုပါဖူး 0.9.3 ဗားရှင်း. နှင့်ထွက် logging ကြိုးစားခဲ့, ရက်ပေါင်းနှင့်နာရီစောင့်ဆိုင်း. အပေါ်နဲ့ off နှိပ်လိုက်ဒါပေါ်. အဘယ်သူမျှမ update ကို. ငါအလံအလုပ်လုပ်ချင်! ထို့အပြင်ဘာသာပြန်ချက်မရှိတော့ကြောင့်ဖြစ်ပုံရသည်အလုပ်လုပ်တယ်…
အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 11:05 နံနက်
wordpress ကိုအတွက်ပြဿနာတစ်ခုရှိပါသည် 3.7, Update လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းထွက်လာပါတယ်မဟုတ်သော update ကို url တစ်ခုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့,
1. တစ်ဦးဗားရှင်း 0.9.4 အရာ re-enable အပ်ဒိတ်လိမ့်မည် WordPress.org မှဖြန့်ချိလိမ့်မည်
2. ကိုယ်တိုင်ဒီကနေဖိုင်ကို download လုပ်ပါနှင့် update ကိုလုပ်ဆောင်
အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 11:07 နံနက်
အိုကေ. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ငါအရူးသို့မဟုတ် Smt ထင်! 😉
အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 11:08 နံနက်
အောက်တိုဘာလ 31, 2013 တွင် 11:10 နံနက်
အိုကေ. အေးချမ်းသော. ဤရွေ့ကား, ပေါ်မှာရှိသမျှကိုသင်၏အလုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်စကား! လွယ်ကူငါ့ကိုထုတ်ဝေရန်အဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါဤမျှလောက်ကူညီပေးသည်နှင့်အခြားသူများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အဘို့အ!
ဒီဇင်ဘာလ 10, 2013 တွင် 10:06 နံနက်
ငါတန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါအလံချွတ်မယ်လို့ထင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဗားရှင်းဖို့အဆင့်မြှင့်လုပ်ဖို့ delay လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဘာသာစကားများကို select နိုင်ဖြစ်ခြင်းမခံခဲ့ရ… ငါကဘာဖြစ်တယ်လို့လူမိုက်! plugins ကိုအသုံးပြုသူအများဆုံးအဖြစ်, ကျနော်တို့ရုံဘာတစ်ခုမှအခမဲ့တစ်ခုခုရဖို့အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်ယုံကြည်. ငါဂုဏ်ယူပါတယ်အကြီးအလုပျအတှကျအကြှနျုပျကိုပြန်ပေးပါ့မယ်ကြောင့်ပေးကမ်းတစ်လမ်းကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်စဉ်းစားရန်အောင်မှ Transposh ကဘာလဲဆိုတာ.
ဒီဇင်ဘာလ 12, 2013 တွင် 6:39 ညနေ